watchOS 4.2.3 uye tvOS 11.2.6 Ikozvino Yakawanikwa Kugadzirisa Matambudziko eTelugu | IPhone nhau
watchOS 4.2.3 uye tvOS 11.2.6 yave kuwanikwa kugadzirisa nyaya dzeTelugu
Iyo inofara Telugu chimiro chave chiri pamiromo yevashandisi vazhinji mumazuva apfuura, nekuda kwematambudziko ayo akakonzera mumidziyo yakaigamuchira, zvishandiso zvaive kutanga kusashanda uye yaingove mhinduro yavo yaive yekuvadzorera kubva pakutanga kana kune vhezheni yapfuura, sekureba kwataive nayo.
Asi hunhu uyu hauna kukanganisa iOS chete, asi ese maApple anoshanda masystem aigona kubatika, saka Apple yakamanikidzwa kuburitsa yekumhanyisa yekuvandudza yavo vese, yekuvandudza iyo iyo watchOS inosvika vhezheni 4.2.3 uye tvOS kune vhezheni 11.2.6.
Asi chiratidzo cheIndia chinonzi Telugu hachisiri icho chete chikonzero, kunyangwe kana iri main kuvhura inogadziridza nekukurumidza uye ichimhanya, nekuti mune dzidziso uye maererano neApple kukanganisa uku kwakange kwatogadziriswa mumabetas evanogadzira masisitimu ese anoshanda anotarisirwa nekambani yeCompertino-based vari kuyedza izvozvi. Zvinoenderana neruzivo rwekuvandudzwa uku, mashandiro uye kugadzikana kwesystem zvakagadziridzwa mukuwedzera kugadzirisa mamwe madhiri ayo akaonekwawo mushure mekupedzisira kugadzirisa.
Asi pamusoro peApple TV uye Apple Watch, iyo Mac inoshanda system, macOS, yaigonawo kupenga pandakagamuchira ichi chiratidzo, saka isu zvakare tine yekuvandudzwa inowanikwa kwatiri kuitira kuti kana tikatambira ichi chiratidzo cheIndia, timu yedu ichaenderera ichishanda sepakutanga. Iyi yekuvandudza inotora mashoma mashoma megabytes, saka iyo yekuvandudza maitiro haizotitore isu yakareba kupfuura zvakajairwa, ndiko kuti, zvinogara zviri nani kugadzirisa kana tichiziva kuti hatisi kuzoishandisa kwemaminetsi mashoma, nekuti maitiro acho dzimwe nguva zvinotora nguva yakareba kupfuura zvakajairwa kunyangwe iyo yekuvandudza ichitora nzvimbo diki kwazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » watchOS 4.2.3 uye tvOS 11.2.6 yave kuwanikwa kugadzirisa nyaya dzeTelugu
Drone inodonha paApple Park Iye Apple akarova pasi here?
Apple Inoburitsa iOS 11.2.6 kugadzirisa Telugu Symbol Bug